Home Horyaalka Ingiriiska Manchester City oo xiiseyneysa saxiixa Robin Gosens
Daafaca Atalanta BC Robin Gosens ayaa lagu soo waramayaa inuu u ka soo muuqday bartilmaameedka suuqa kala iibsiga ee kooxda Manchester City .
26 jirkaan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku qaadanaya kooxdiisa reer Talyaani intii lagu jiray ololihii 2020-21, isagoo dhaliyay sagaal gool isla markaana sameeyay lix caawin 30 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Gosens ayaa inta badan u ciyaarayay khadka dhexe ee bidix heer kooxeed xilli ciyaareedkan wuxuuna haatan dhaliyay seddex ka mid ah afartiisii ​​kulan ee ugu dambeysay Serie A intii lagu jiray qaab ciyaareed cajiib ah.
Sida laga soo xigtay Tuttomercato , tababaraha Man City Pep Guardiola ayaa la dhacsan xiddiga heerka caalami ee dalka Jarmalka wuxuuna u aqoonsaday inuu yahay bedelka ugu macquulsan ee Oleksandr Zinchenko .
Ciyaaryahankii hore ee Vitesse ayaa qandaraaskiisa Atalanta waxa uu dhacayaa xagaaga soo socda, taasoo la micno ah in kooxda reer Talyaani lagu qasbi karo inay iibiso suuqa soo socda haddii uusan saxiixin qandaraas kordhin.
Gosens wuxuu dhaliyay 24 jeer wuxuuna ku caawiyay 18 caawiye 135 kulan oo uu u ciyaaray La Dea.
Previous articleManchester United oo isha ku heysa midkood Lautaro Martinez, ama Milan Skriniar
Next articleManchester United oo Bar-bar dhicii 3-aad la kulantay Kulankeeda Crystal Palace